गुगलको पैसा – दश डलर टार्गेट – Krishna Thapa
धेरै दिन भयो, व्यस्त व्यस्त छु तर केमा ? यसको उत्तर भने आफैसंग पनि छैन । सबै कुरा अनियमित । एउटा कुरा भने नियमित जस्तै भएको छ – ब्लग लेख्ने बेला सधैजसो व्यस्तताकै प्रसंग उठाएर शुरु गर्नु 🙂 केही कथाहरु त छन, अलिकति च्यातिएका, लेख्दा लेख्दै छोडेका अधुरा वा पुरै लेखेर पनि राख्न मन नभएका । दिनहरु भिन्न प्रकृतिले व्यतित हुन् थालेका छन, पहिलेको भन्दा बिल्कुल भिन्न । ओह! म हिड्ने, हास्ने, खेल्ने र म रम्ने बिषयहरु कस्तरी बदलिएका ? पार्थक्यको यो भिषण पर्दा लाउने समयसँग बारम्बार सोधी रहेछु म, सिर्जनामा हराउन चाहने र प्रतिभा उजागर गर्न चाहने त्यो मन कहाँ गयो ? ए कोही फर्काइदेउ, त्यो कृष्णपक्ष कहाँ गयो ?
रहर र चाहना अनि लक्ष्य उद्देस्य अनगिन्ती हुन्छन मानिसका.. केही पुरा र केही अधुरा । ब्लग र लेखन त्यस्तै एउटा रहर । हामी हरेक दिन इन्टरनेटमा जान्छौं, दिनमा कैयौं पटक गुगललाइ सामाग्री खोज्न अह्राउछौँ । फेसबुक त हामी धेरैको आदत नै भएको छ । संसार डिजिटल दुनियामा प्रवेश गरेजस्तो, इन्टरनेट संस्कृतिमा हामी रमाइरहेका छौँ । हाम्रो यही इन्टरनेट ट्राफिक यानेकि भिजिट र क्लिकको फाइदा फेसबुक र गुगल जस्ता कम्पनीहरुले उठाइरहेका छन । हामीले प्रयोग गरेको भिजिट ट्राफिकको आधारमा उनीहरुलाई इन्टरनेट एड मिल्ने गर्छ तर त्यो पैसा एक्लै लिइरहेका हुन्छन । राम्रा ट्राफिक भएका ब्लग, साइटहरुलाइ केही विज्ञापन शेयर गरेर नाउँमात्रको आय गुगलले बाडे पनि तपाईं हामी जस्ता सामान्य प्रयोगकर्ता (ट्राफिकको खास श्रोत) लाई भने उनीहरु केही शेयर गरिरहेका हुदैनन् ।
अघिल्लो बर्ष नेपाली ब्लगरहरुको भेलामा मैले गुगल आम्दानीको बिषयमा कुरा उठाएको थिएँ । सबैको जोड स्तरीय सामाग्री सम्प्रेषणमा केन्द्रित रह्यो, पैसामा हैन । हुन त हो, सिर्जना अर्थमुखी हुनुहुन्न र यो पैसामा तुलना हुन पनि सक्दैन । त्यसमाथि नेपाली भाषामा लेखिएका ब्लगहरुमा गुगलको पैसा आकाशको फलजस्तै हो । तर छिमेकी राष्ट्र भारतका अमित अग्रवालले ब्लगबाट मात्र महिनाको ३६ हजार डलर आम्दानी गर्दा रहेछन । ३६ हजार डलर ? यो हाम्रो लागि अपत्यारिलो लाग्न सक्छ । तर सत्य हो, उनका थुप्रै प्राविधिक विषयका सक्रिय ब्लगहरु छन, उनीजस्ता भारतमा सिक्स डिजिट आम्दानी हुने असंख्य फुल टाइम ब्लगर/पब्लिशरहरू छन, उनीहरूको पेशा नै व्यवसायिक ब्लगिङ हो ।
नेपाली वेब पब्लिशरले किन सक्दैनन् त? जहाँ ट्राफिक र क्लिक हुन्छ भने त्यहाँ रेभिन्यु हुन्छ, थोरै हुन सक्छ तर हुन्छ । यही सिदान्तलाइ पच्छ्याउदै मैले सानो टार्गेट बनाएँ – टेन डलर टार्गेट पर डे । अर्थात दिनको दश डलर बनाउने । एड्सेन्स र एडवर्ड भन्ने कार्यक्रम अन्तर्गत विज्ञापन राख्न दिन्छ गुगलले । गुगलको अर्बौं आम्दानीको मुख्य श्रोत पनि यही नै हो । पहिलो पब्लिशरलाइ र दोश्रो पब्लिशर + विज्ञापनकर्तालाइ । पहिलो कार्यक्रममा भाग लिएँ जसमा मेरा सर्च इन्जिन र युट्युब होस्टेड विज्ञापन पनि शामिल छन । र इन्टरनेटमा बिताउने फुर्सदको समयलाइ सामाग्री खोजी, पोस्टिङ, शेयरिंग र भिजिटर ग्यादरिंगमा लगाएँ। दश डलर निकै सानो टार्गेट हो, विदेशमा बस्नेहरुलाई एकडेड घन्टाको पारिश्रमिक होला । तर मैले सम्झिएँ – ‘स्मल थिंङ्गस क्यान मेक अ बिग डिफरेन्स’ । त्यसमाथि म गाउँमा जन्मिएको हुर्केको सामान्य किसानको छोरा । घर फर्केपछि दिनको दश यानेकि महिनाको ३०० मेरो जागिर बन्न सक्छ । फेरी त्यसबेला सम्म त यो टार्गेट दोब्बर हुन पनि के बेर ?
My google adsense overview
म धेरै समय यही स्मल थिंङ्गमा अल्झिएँ ।
यो सानो टार्गेट त क्रस भएको छ तर यसले मेरो दिनचर्या र सिर्जनामा पारेको असरलाइ न्यून गर्नेपर्ने अर्को आवश्यकता साथसाथै थपिएको पनि छ । समयको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?
आफुलाई अनुशासन र नियममा नबाँधी केही हुदैन, यो त प्रष्ट छ । त्यसैले मैले अब हरेक हप्ताको शुक्रबार एउटा रचना (कथा, कविता, गीत, गज़ल या गन्थन मन्थन जेसुकै ) यही ब्लगमा लेख्ने अर्को टार्गेट बनाएको छु, ‘दश डलर टार्गेट’ जस्तै त्यो टार्गेट पनि पुरा गर्न सकिएला ?
Good Luck and Congrats! Journey has just started! And I really liked this concept.
मैले त्यस्तो टार्गेट राखेको छैन। तपाईं लाई शुभकामना छ। अली लाग्यो भने तेति गार्हो नहोला। मेरो त बानी के लागि सकेको छ भने कुनै वेब्साइटमा केही पढ्यो भने एउटा भए पनि बिज्ञापन क्लिक गर्ने। सित्तैमा नपद्ने।
अर्जुन दुङमेन् says:
सर, यहाँको "टार्जेट प्रोग्राम" राम्रो छ । आफ्नो थुप्रै अनुभबहरु पश्चात शुरुवात गर्नु भएको दिर्घकालिन योजना हो यो । साथै, आफ्नो लेखन कार्यलाई पनि “हेम्पर” नपरोस् भन्ने हेतुले हप्ताको एकदिन छुट्ट्याउनु भा'को रहेछ । त्यतातिर पनि नबिर्सिकन ध्यान दिनुहोला । उक्त "टार्जेट्" मा माथि देखिएको आम्दामीको "रेशियो" हेर्दा त झनै उपयुक्त लाग्यो मलाई । प्रति दिनको $ १०.०० को दरले मासिक $ ३००.०० जम्मा गर्नु भनेको चान्चुने कुरा होईन । यहाँलाई सफलता र अर्थलाभको कामना !
प्रस्तुत आलेख धेरै राम्रो छ ब्रो , जुन अहिले हामीले गरि रहेको काम वा समयलाई खेर फाल्नु हुन्न भन्ने मनसाय ले लागि परि रहेको सम सामयिक अबस्थामा हजुरले सबै कुराहरु खुलाएर बिस्तृत रुपमा पढ्ने मौका दिनु भएको छ , यो कुनै चानचुने काम पनि होइंन र चानचुने कुरा नि होइन , यसरि लागि पर्नेहरु साएद कमै होलान, धेरै खुशी लाग्यो .. यसलाई निरन्तरता दिदै जानु होला अबश्य पनि एक दिन जुन १० $ को टार्गेट छ, त्यो टार्गेट पुरा होस् अनि सफलताको कमाना ,,, म त चाहन्थे दिनमा दश गुना दश नै होस् … ब्रो अनि अग्रिम शुभकामना पनि २०६९ सालको ….
कृष्णपक्ष थापा says:
प्रतिक्रिया दिनुहुने सबैमा हार्दिक धन्यवाद,
मेरो टेन डलर टार्गेटमा एडमिन-उद्धव भाइको जति साथ् अरु कसैको पनि छैन भन्छु। यो पोष्टको मुख्य संदेश पनि यही नै हो कि हामीले इन्टरनेटमा बस्ने फुर्सदको समय सानो भएपनि सिर्जनशील साथसाथै उत्पादक कार्यमा लगाउनु पर्छ । धैर्यताका साथ लागि परे शुरुमा असम्भव जस्तो लाग्ने पनि सबै कुराहरु बिस्तारै सम्भव हुदै जान्छन । तपाइको अर्निंग त पहिले नै यसको दोब्बर भन्दा माथि छ । अन्त्यमा यो टार्गेट बढेर यसको दोब्बर भएको उपलक्ष्यमा मेरो घरमा फेरी अर्को भाले पार्टीको आयोजना गर्नु पर्छ भन्ने हाम्लाई लाइ रा'छ । हेप्पी अर्निंग उद्धव ब्रो … ।
मेरो विवश says:
यहाँको लेखार्इमा र काम गरार्इमा पक्कै दम छ र त विस्तारै सफलताको सिँढी चढ्दै हुनुहुन्छ । त्यसैले मेरो तर्फबाट पनि यहाँलार्इ बधाइ र शुभकामना प्रत्येक दिन रहनेछ ।
सफलताको शुभकामना कृष्ण जी हजुरका कदमहरु यसरिनै निरन्तर अगाडी बडीरन सफलता मिलोस एकदिन अबस्य पुरा हुने छ "'स्मल थिंङ्गस क्यान मेक अ बिग डिफरेन्स' ।
ब्लगमा रमाएको पनि लगभग २ वर्ष नै हुन आँटेछ गुगलको एडसेन्सको अहिलेसम्म राख्न सक्या हैन । टार्गेट दस डलर पर डे धेरै नै राम्रो लाग्यो । अरु केही नभए पनि इन्टरनेटको खर्चसम्म एडसेन्सले दिन सक्यो भने ठुलो कुरा हो हामी नेपाली ब्लगरहरुको लागि .
कुनै दिन अमित अग्रवालको हारीहारीमा पुग्नु होस नयाँ वर्षले यो कामना पुरा गर्न सहयोग जुटाउने छ भने तपाइका स्तरीय सामाग्रीहरूमा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहीनीहरूले पनि सहयोग पुरूयाउनु हुने नै छ । सफलताको शुभकामना! Gyanu Basnet
Bust of Luck and Congrats!